को कार्यकारी आदेश शरणार्थी कस्तो असर गर्नेछ? जानकारी 16 भाषाहरु | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
#441380 (कुनै शीर्षक)
कसरी काम पोर्टल मा काम को लागि लागू गर्न
GED के हो®
TASC के हो
के हो HiSET ™
कलेज लागि तिर्ने
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शरणार्थी र आप्रवासी विद्यार्थी मा प्रोफाइल
निःशुल्क नागरिकता क्लास
यस प्राकृतिक साक्षात्कार के हो?
मेरो नागरिकता साक्षात्कार मा के प्रश्न हुनेछ?
शरणार्थी प्रवेश 2019
परिवार reunification - अमेरिका आफ्नो परिवार ल्याउन
शरणार्थी यात्रा कागजात र यात्रा अधिकार
आप्रवासी थुनामा: व्यक्तिहरूलाई अमेरिकी-मेक्सिको बोर्डर मा शरण लागि आवेदन मदत
बाबु आमा र हुर्काउन छोराछोरीलाई
कसरी चलाउनु? संयुक्त राज्य अमेरिका मा ड्राइव कसरी जानकारी
शरणार्थी आवास: बाँच्न ठाउँ कसरी पाउन
खाना र लुगा कहाँ किन्न
सार्वजनिक विद्यालय के हो?
संयुक्त राज्य अमेरिका मा आप्रवासी र शरणार्थीका लागि स्वास्थ्य
चिकित्सा नुस्खे आफ्नो डाक्टर तपाईं दिन्छ औषधि हो
महिला स्वास्थ्य हेरविचार
बच्चाहरु को लागि सुइहरु के हुन्? आफ्नो बच्चाहरु र किशोरका बारेमा स्वास्थ्य सूचना
अमेरिकामा कर तिर्न कसरी
अन्तर्राष्ट्रीय पैसा पठाउन
राष्ट्रपति ट्रम्प गरेको कार्यकारी आदेश अमेरिका मा शरणार्थी कस्तो असर गर्नेछ?
मा शरणार्थी Resettlement गर्न ट्रम्प प्रशासन गरेको नवीनतम परिवर्तनहरू र महत्त्वपूर्ण अपडेट यी परिवर्तनहरू तपाईंलाई कसरी असर
ट्रम्प प्रशासन संयुक्त राज्य अमेरिका मा शरणार्थी resettlement असर गर्नेछ एक नयाँ नीति बनाएको छ.
हामी यो नीति संयुक्त राज्य अमेरिका अदालत प्रणालीमा चुनौती गरिने आशा. हाल तलको जानकारी सही छ तर यो चाँडै फेरि परिवर्तन हुन सक्छ. हामी यो जानकारी बित्तिकै हामी कुनै पनि परिवर्तन सिक्न रूपमा अद्यावधिक हुनेछ.
तीन महत्त्वपूर्ण अद्यावधिक
1) अप्रिल मा 25, 2018, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा प्रतिबन्धित कि केही देशहरूमा देखि कार्यकारी आदेश बारेमा तर्क सुने. अमेरिकी सलिसीटर सामान्य भएको यात्रा प्रतिबन्ध संवैधानिक छ भन्छन्, तर आप्रवासी अधिकार समूह सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध विरोध गर्न आग्रह.
हालको यात्रा प्रतिबन्ध प्रतिबन्ध सात राष्ट्रका यात्रा - इरान, लिबिया, सिरिया, येमेन, सोमालिया, भेनेजुएला र उत्तर कोरिया. यी देशका मानिसहरू संयुक्त राज्य अमेरिका बसाइँ सर्ने सक्छ, र धेरै काम वा अध्ययन वा छुट्टी लागि आउन अनुमति छैन.
अद्यावधिक: जुन मा 26, को यात्रा प्रतिबन्ध अनुमति निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरे. को यात्रा प्रतिबन्ध बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय बारे थप पढ्नुहोस्.
2) वृद्धि सुरक्षा जाँच सबै शरणार्थीका लागि सुरु हुनेछ.
प्रशासन सुरक्षा जाँच र पृष्ठभूमि जाँच बढ्दै छ. यो सबै शरणार्थीका लागि आवश्यक हुनेछ, पहिले नै आफ्नो सुरक्षा जाँच भइरहेको भएकाहरूलाई सहित.
3) प्रशासन अस्थायी रूपमा रोकिएको छ (रोकिएको) आवेदन "पछि-को सहभागी हुनुहोस्". (यी संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो पति वा छोराछोरी ल्याउन कानुनी आवेदन गर्दै).
प्रशासन अस्थायी रूपमा रोकिएको छ (रोकिएको) सबै FTJ म-730 आवेदन. "पछि-को सहभागी हुनुहोस्" आवेदन फेरि सुरु हुनेछ जब हामी थाहा छैन.
साइन अप हाम्रो समाचारपत्र लागि
शरणार्थीका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी इमेल प्राप्त